John Kambewa: Nzira yekuimba inorema asi inoda shungu – Ntu News
November 10, 2021 November 10, 2021 Jasmin Rose	0 Comments	NtuNews Zimbabwe
Vaimbi vazhinji vachiri kusumuka mumimhanzi vanotadza kuonekwa kugona kwavo kuburikidza nekushaiwa zvikwanisiro zvinozoita kuti mazita avo ayende mberi.
Mumwe wevachiri kusumuka panyaya dzemumhanzi John Kambewa anoshevedzwa nezita rekuti Sector pabasa rekuimba anoti iye rwendo rwekuimba haruna kureruka zvikurusei kune vachiri kusumukira vari vechidiki sezvo vanenge vasina kwavanowana mari dzinodiwa kufambisa zvinotarisirwa kuti vazosvikewo pakutenda kuti chipo chekuimba chinogona kusandura hupenyu.
Achitaura nebepa nhau rino re NTU News Zimbabwe, Kambewa uyo akabarwa mugore ra 1998 akazotanga kuimba muna 2010 achishandisa zita rokuti Ras Kay rakazochinja mugore ra 2017 achizodaidzwa kunzi Sector, anoti iye kunyangwe zvazvo zvakadero asi varikusumuka vanofanira kuramba vaine hushingi nekuti mune ramangwana vachazodzidzisawo varikusumuka.
“Ndinoda kupa mashoko kune vamwe vangu vachiri kusumukira mune zvekuimba izvi kuti musarase tariro negwara asi shuwiraiwo zvikuru mubasa iri.
“Nzira ye music inorema asi zvinoda shungu kuti tisvike uye tinosvika tikaramba takashinga.”
Sezvo vanhu vazhinji vachiwona sekunge imwe yemisambo inoimbwa nevechidiki isina chainovaka, muimbi we Zim Dancehall anoti iye vanhu vanofanira kuziva kuti chakakosha pakuimba mashoko anoburitswa nemuimbi kwete musambo wemumhanzi.
“Ndinoimba Zim Dancehall asi zvekare ndinombobatawo Afro genre, RnB and Hip Hop.
“Genre haisiyo inofanira kutariswa nevanhu kuti wazokwanise kuona kukosha kwekusumudzira vaimbi asi kuti mazwi anobuda kuti anepa dzidzoso ipi kunyika.
“Dai tose taiyimba musambo mumwe chete mumhanzi hawainakidza kuterera, saka ngatiedzei nepose patinogona kukurudzira nekusumudzira vanoimba mimhanzi yakasiyana siyana,” akatsanangura mukomana wemuguta re Kadoma.
Nemimhanzi inodarika makumi matatu (more than 30 songs) nemubatanidzwa unosvika gumi nematanhatu (16 collaborations) Sector anoti iye pane matambudziko anotadzisa kuti basa rake rifambe zvakanaka asi anoramba achisimbiswa nekuda kweumwe wevaimbi vane mukurumbira muZim Dancehall.
“Seh Calaz inspired me chero hangu ndisina kubvira ndamuona kunze kwekungomuonera mu tv, social media, kumunzwa muma radios nekumuverenga muma paper nhau.
“Mimhanzi yake yakaita kuti ndipinde mu music industry.
“Zviri kunyanya kunditadzisa kuenda mberi inyaya yemari yeku recorder music, zviri kundidzosera kuma shure uyezve pama songs andakaita aripo kumaburitsa kuri kufamba zvishoma nekuti dzimwe nguva unenge usina neye kutenga bundle chairo.
“Panodawo kuitwawo ma official vidoes ema songs andakaita.”
John Kambewa akaita mamwe emimhanzi yemibatanidzwa (collaborations) kusanganisira Ndakura Kudai nemuimbi Dimitry Boss aka Admire Sanangurai, Dziva Rerudo na Privy aka Rumbie, na Lufuno Kaulusa vakaita Ndiwe Wakatanga Love Song uyezve Kunyepera Kuti Farira na Rattan aka Ras Codza.
Nziyo dzake zhinji dzakaitwa ku Proper Bliqxs Music, uyezve mu Kadoma ku Hit Records akaita na Dimitry na Casy Man kambo kanonzi Pashata. Imwe yemimhanzi yake inosanganisira Gona ana Gona, Mumoyo mangu, Uchandiona, Jonso we magame, Zvakatangira kujecha, Ndini That Guy, Mabhomba muhomwe uyezve Ka type kandinoda Pazvinhu.
Ma Producer akashanda naye anosanganisira Brandon Masikini a.k.a DJ Skinner Kadoma pamwe chete na Obey Ngomaikarira a.k.a DJ Boxer vose ndeve mu Kadoma.
← Xoey Annah Chimombe: Marginalized groups should not remain vulnerable forever
A Divine Journey Whose Time Has Come →